ओमानमा यसरी गरियो नववर्ष २०७६ को स्वागत
खरिपाटीका स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निःशुल्क स्वास्थ्यकक्ष
नेपाली जनसम्पर्क समिति ओमानले मनायो स्थापना दिवस
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 10 months ago April 14, 2019
आरके श्रीवास्तव, ओमान
ओमानमा रहेका नेपालीहरूले वि.सं. २०७५ लाई विदाई र नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गर्दै नववर्ष उत्सव मनाएका छन् ।
राजधानी मस्कटबाट करिव एक हजार किलोमिटर टाढा ओमानको सलालाहमा गैरआवासीय नेपाली संघ क्षेत्रीय समन्वय परिषद (सलाह)ले भव्य रुपमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी नयाँ वर्ष उत्सव मनाएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालदेखि आएका चर्चित लोकदोहोरी गायिका देवी घर्ती मगर र मोडेल तथा डान्सर प्रियंका नेपालीले उपस्थित दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन गराएका थिए ।
त्यस्तै, अल बथिनाहा साहममा रहेका नेपालीहरू र नेपाल बज्जिका पत्रकार संघ ओमानले पनि नयाँ वर्षलाई उत्सवका रुपमा मनाएका छन् ।
यसैबीच, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवासी सङ्गठन नेपाली जनसम्पर्क समिति ओमानले नेपाली काङ्ग्रेसको ६९औँ स्थापना दिवस र नयाँ वर्ष उत्सव मनाएको छ । १२ अप्रिल २०१९ शुक्रबारका दिन राजधानी मस्कटस्थित बर्काको अलनुर रिसोर्टमा नेपाली जनसम्पर्क समिति ओमानको वार्षिकोत्सव र नयाँवर्षको अवसर पारेर कार्यक्रम आयोजन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
जनसम्पर्क समिति ओमानका कार्यवाहक सभापति सालिक चापागाईंको अध्यक्षता र नवीन पङ्गेनीको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम र बनभोजको पनि आयोजना गरिएको थियो ।
यस अवसरमा ओमानमा रहेका सयौँ नेपालीहरूको सहभागिता रहेको र नववर्षको अवसरमा शुभकामना अदानप्रदान गरिएको थियो ।
फेन्सिङका पदक विजेता सम्मानित
ऐतिहासिक गलकोटमा विदेशी मूर्तिकारको जमघट
प्रदेश नं २ को सरकार परिवर्तन होइन अब राजपासँग पार्टी एकीकरण : उपेन्द्र यादव